Shirka Aerospace & Difaaca Shirkadaha wuxuu siiyaa alaab-qeybiyeyaasha Fursad ay ku Ballaariyaan Kartida, Awoodda - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Shirka Aerospace & Difaaca Alaab-qeybiyeyaasha wuxuu siiyaa fursad-bixiyeyaasha Fursad ay ku Kordhiyaan Karti, Awood
Shirka Aerospace & Difaaca Alaab-qeybiyeyaasha wuxuu siiyaa fursad-bixiyeyaasha Fursad ay ku Kordhiyaan Karti, Awood
- Boeing la ansixiyay munaasabad lagu qabtay Maarso 11 ilaa 13, 2014 Xarunta Shirarka Seattle
SEATTLE, Juun 19, 2013 - Soo-saareyaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha ka kala socda aerospace-ka caalamiga ah iyo warshadaha difaaca ayaa sannadka dambe isugu imaan doona Seattle iyagoo ka qeyb galaya Shirka Aerospace & Defence Supplier Summit. Warshadaha aerospace waxay wajahayaan koritaan la taaban karo sanadaha soo socda, dhacdadan gaarka ah waxay u suurta galisaa shirkadaha dhamaan silsiladaha saadka si ay u aqoonsadaan la-hawlgalayaasha cusub ee ganacsiga iyo fursadaha.
Shirka Aerospace & Difaaca Alaab-qeybiyaha waxaa lagu qaban doonaa Xarunta Shirarka ee Seattle Maarso 11-13, 2014. Waxaa ansaxiyay Shirkadda Boeing waxaana martigelin doona Aaladda Aasaasiga ee BCI iyadoo taageero ka heleysa Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington. Dhacdooyinka kafaala qaadayaasha waxaa ka mid ah Iskaashiga Washington Aerospace, Accenture iyo Magaalada Renton.
Afar qaybood oo ganacsi oo Boeing ah - Diyaarado Ganacsi; Difaaca, Booska iyo Amniga; Injineernimada, Hawlgallada & Teknolojiyada; iyo Kooxda Wadaagista Adeegyada - ayaa ka qayb qaadan doona dhacdada.
"Fursad aad u weyn ayaa ka jirta suuqa aerospace-ka 20-ka sano ee soo socota iskaashiguna waa furaha," ayuu yiri Kent Fisher, madaxweyne ku xigeenka iyo maareeyaha guud ee Maamulka Alaab-qeybiyeyaasha Diyaaradaha Boeing. “Boeing waxay u baahan tahay firfircooni, hawlgal, karti sarre leh oo si joogto ah u wanaajisa silsiladda saadka. Taasi waa sababta aan u taageereyno Shirarka Aerospace & Difaaca Alaab-qeybiyeyaasha 2014 ee Seattle oo aan ku dhiirrigelineyno alaab-qeybiyeyaashayada heerka ugu sarreeya inay ka soo qeybgalaan. ”
"Waxaan si aad ah ugu faraxsanahay in shirkan muhiimka ah ee alaab-qeybiyeyaasha ah aan dib ugu laabanno Seattle," ayuu yiri Brian Bonlender, Agaasimaha Ganacsiga Gobolka Washington. "Tani waa fursad ku habboon in lagu soo bandhigo boqolaal ka mid ah shirkadaha Washington ee aadka u wanaagsan shirkadaha wadaagga aerospace ee ka kala yimid daafaha dalka iyo adduunka."
Shirweynihii 2012 ee Seattle waxaa ka soo qeyb galay 800 shirkadood oo matalaya 30 dal oo ka qeyb galaya 10,000 kulan oo horey loo sii qorsheeyay oo la isku weydaarsanayo fikradaha iyo sahaminta iskaashiyo suurtagal ah. Barnaamijka 2014 wuxuu siin doonaa dhammaan kaqeybgalayaasha fursad ay isku diiwaan geliyaan, ku aqoonsadaan kuna codsadaan kulamada lala yeesho dadka lala xiriirayo ka hor bandhiga. Kulamada oo mid-qof ayaa lagu qaban doonaa goobta.
Maalinta ugu horreysa waxaa ku jiri doona soo bandhigida Boeing waxaana ku jira fikrado muhiim ah oo ka imanaya hoggaamiyeyaasha warshadaha iyada oo maalmaha soo socda ay ka kooban yihiin aqoon isweydaarsiyo iyo shirar hal-hal ah. Marka lagu daro bixinta gole isweydaarsiga fikradaha iyo horumarinta fursadaha ganacsi ee mustaqbalka, Shirka Aerospace & Difaaca Shirkadaha waa mid ka mid ah dhacdooyinka isku xirka ganacsiga adduunka ugu weyn ee warshadaha aerospace.
Diiwaangelinta 2014 Aerospace & Difaaca Alaab-qeybiyaha Difaaca ayaa hadda furan. Wixii macluumaad dheeraad ah, ka eeg http://www.bciaerospace.com/seattle.
← Mashaariicda Broadband ee Gobolka Washington waxay ka helaan $ 300,000 deeqo Waxaa La Shaaciyay Ku Guuleystayaasha Abaalmarinta Bulshooyinka Caanka Ah Ee 2013 →